Xil ka qaadista Agaasimaha Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka: Madaxweynaha, RW iyo Mucaaradka? - Diblomaasi
RW Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaqa-joojin ku sameeyay agaasimaha hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-Sugidda Qaranka Fahad Yaasiin, sida lagu xaqiijiyay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska Ra’isul Wasaaraha.
Rooble ayaa faray Fahad Yaasiin in muddo sadex maalood gudahood ah uu xilka hay’adda NISA ku wareejiyo. Ra’isul Wasaare Rooble ayaa Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac oo hore u soo noqday agaasimaha NISA si ku-meel gaar ah ugu magacaabay agaasimaha NISA.
Ra’isul Wasare Rooble ayaa sidoo kale faray xeel-ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka inuu baaritaan rasmi ah oo dhameystiran ku sameeyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax, kaddibna horgeeyoo ‘Maxkamad sharci ahoo awood u leh’.
Fahad Yasin Xaaji Dahir ayaa horraantii Axaddii uga jawaabey dalabkii Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo shaley 48 saacadood u qabtey in warbixin dhameystiran looga keeno dilkii Ikraam Tahliil oo aheyd gabar dhallinyaro ah oo u shaqeyneysey hay’adda Nabad-Sugidda Qaranka.
Dhinaca kale, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa difaacay taliyaha Hay’adda Sirdoon iyo Nabad-sugidda Qaranka Fahad Yaasiin, wuxuuna amray inuu shaqadiisa sii wato, sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyda Villa Somalia.
Tallaabada Madaxweynaha ayaa kahor imaaneysa go’aankii Ra’isul Wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble uu shaqada uga joojiyay Fahad Yaasiin, kaddib markii Ra’isul Wasaaruhu ku qanci waayay jawaabtii uu ka sugayay ee la xiriirtay geerida Ikraan Tahliil oo aheyd sarkaal ka tirsan hay’adda NISA.
Qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa u qornaa sidan:-
MADAXWEYNE FARMAAJO OO FARAY MUDANE FAHAD YAASIIN IN UU SII WADO HOGGAAMINTA HAY’ADDA SIRDOONKA IYO NABADDA SUGIDDA QARANKA
Sibteembar 06, 2021;
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Markii uu arkay warqadda sumaddeedu ay tahay XRW/314/9/2021 ee uu soo saaray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ee ku saabsan shaqo ka joojinta Taliyaha HNSQ iyo magacaabista Taliye Kumeel Gaar ah;
Markii uu arkay; qodobada 87-aad iyo 90-aad ee Dastuurka Kumeel Gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qeexaya in Madaxweynaha Jamhuuriyaddu uu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi’da asaasiga ah ee Dastuurka, uuna yahay Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida;
Markii uu arkay; qodobada 97-aad iyo 100 ee Dastuurka Kumeel-gaarka ah ee JFS oo hagaya awoodaha Laanta Fulinta iyo Xilka Wasiirka Koowaad ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee ku aaddan xilka-qaadista Taliyeyaasha Ciidamada Qalabka Sida, taas oo ku eg talo-soojedin iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda, dhaqaalaha iyo maamulka dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyada isagoo dareensan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay’adda Nabad Sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khataraha argagaxisadu ku hayaan Soomaaliya iyo saaxibbada caalamkaba;
Madaxweynaha JFS oo ilaalinaya masuuliyadda ka saaran joojinta tillaabo kasta oo dhiirrigelin u noqon karta kooxaha arrgaxisada, wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga.
Wuxuu soo saaray qodobadan;
Go’aanka ka soo baxay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble in uu yahay mid baal marsan xeerarka oo aan waafaqsanayn Dastuurka dalka.
Waxaa la farayaa Taliyaha Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in uu sii wado hoggaaminta Hay’dda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, si waafaqsan Dastuurka iyo Wareegtadii Madaxweynahu uu ku magacaabay.
Hay’adda Nabadda Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka waxaa la farayaa in ay horkeento Golaha Amniga Qaranka warbixinta laga sugaayay marka la muddeeyo kulanka ugu horreeya ee Golaha Amniga Qaranka.
Ugu dambeyntii, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu farayaa Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Golaha Xukuumadda in ay si hufan u gutaan masuuliyadda ka saaran dhammeystirka hawlaha doorashooyinka.
Golaha Midowga Musharaxiinta Soomaaliya ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan go’aanka uu ra’iisul wasaare Maxamad Xuseen Rooble shaqada kaga joojiyey agaasimaha Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Waa maxay hay’ad sirdoon? – Diblomaasi | Falanqeyn | Dhaqaalaha | Buuggaag | Gorfaynta buuggaagta
Go’aankaas ayaa waxaa ka horryimid madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo, oo Fahad amray “inuu shaqadiisa sii wato.”
“Goluhu wuxuu u arkaa in go’aanka shaqo joojinta uu fure u yahay caddaalad ay helaan qoyska Ikraan Tahliil oo la afduubay lana dilay. Waxay kaloo billow u tahay soo celinta sumcada hay’adda iyo kalsoonida ay shacbaku ku qabi karaan,” ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen Midowga Musharaxiinta.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa sidoo kale dalbaday in baaritaan lagu sameeyo taliyihii xilka laga joojiyey, waxayna ka horyimaadeen qoraalka uu Farmaajo ku taageeray Fahad Yaasiin.
“Goluhu wuxuu u arkaa qoraalka ka soo baxay Maxamad C/laahi Farmaajo no ah Madaxweyne xilkiisu dhamaaday mid lagu carqaladeynayo cadaalad u raadinta qoyska Ikraan Tahliil, lagu qalqal gelinayo amniga dalka iyo kan doorashooyinka. Madaxweynaha xilkiisu dhamaaday wuxuu cadaystay in uu saaxiibkiis kala wayn yahay ilaalinta xuquuqda muwaadinka, dastuurka dalka iyo danta qaranka,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka Midowga Musharaxiinta.
“Goluhu wuxuu cadaynayaa in Ra’iisal Wasaare Rooble uu mas’uul ka yahay amniga dalka iyo kan doorashooyinka, wuxuuna Goluhu ku garab taagan yahay go’aanka uu cadaaladda ugu raadinayo ehelka Ikraan, kaga dhexsaarayo hoggaanka NISA arrimaha doorashooyinka, kuna soo celinayo sumcadii hay’adda.”
Dhinaca kale, Midowga Musharaxiinta ayaa ugu baaqay ciidanka qalabka sida in ay fuliyaan amarka Ra’iisal Wasaaraha.
Shaqada sirdoonku waa sida sayniska oo kale. Uma uruuriso macluumaadka si aan kala sooc lahayn, waxay si daxadir leh u fiirisaa hawlaha muhiimka ee horyaallo oo kali, iyadoo rajaynaysa in wax muhiim ahi soo bixi doonaan.
Related Topics:RW iyo Mucaaradka?Xil ka qaadista Agaasimaha Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka: Madaxweynaha
Maxaa laga baran karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya?
Geeska Afrika ayaa kamid ah wadamada ay balaayiinta ayaxa ah kusoo duulleen. Beeraladeyda ku dhaqan Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika ayaa sheegaya tirada waalida ah ee ayaxa kusoo duullay beerahooda, waxayna sheegeen in ayaxa u socdaan sida daruur u eg cirka oo madoow.
Cayayaanka ayaa si xawli ah oo yaab leh u baaba’iyey beerihii dalagyada, taas oo halis gelisay hab-nololeedkii beeraladayda.
Ayaxa ayaa ka soo gudbay gacanka cadmeed sanadkii hore, waxayna usoo gudbeen dhinaca Soomaaliya iyo Itoobiya, isbeddelka cimilada ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay.
Aafada ayaxa ayaa ku fiday gobolka oo dhan, khatarna ku ah nolosha tobanaan milyan oo dad ah. Cayayaanka laga baqayo oo baaxaddiisu aan la qiyaasi karin ayaa dhibaato ba’an ku haya marka ay ku soo daadagaan dalagyada iyo dhul daaqsimeedka, iyagoo wax walba ku cunaya saacado gudahood.
Qaramada Midoobe waxa ay sheegtay in gobolka markii horeba uu u nuglaa xalaadda cunto yarida, xaaladda ayaxa waxay ku tilmaameen “masiibo soo socota.” “Waxyaabahani waa wax aad u xun,” ayuu yiri Keith Cressman, oo ah sarkaalka sare ee saadaasha Ayaxa ee Ururka Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay.
Raxan ayax ah cabbirka hal maalin gudaheed, waxay cuni karaan cunto la mid ah tan qof kasta oo ku nool New York iyo California oo la isku daray, ayuu yidhi, Manhattan
Nasiib darro, khubarada qaar ayaa sheegaya in laga yaabo inay tahay heerkulka badda ee kor u kaca duufaannada iyo isbeddelka cimilada. “Haddii aan aragno kororka sii socda ee soo noqnoqda duufaannada,” ayuu yiri Keith Cressman, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan saadaasha Ayaxa oo ka tirsan Hay’adda Cuntada iyo Beeraha, “Waxaan u maleynayaa inaan u qaadan karno inay jiri doonaan dillaacyo badan oo ayax iyo kor u kac ah Geeska Afrika.”
Khubarada ayaa og sida loo joojin karo faafitaanka Ayaxa, balse waxay sheegeen in dadaallada ay curyaamiyeen dhaqaale la’aan iyo maadaama ay adag tahay in lagu buufiyo meelaha ay colaaduhu ka jiraan sida Soomaaliya iyo Yemen.
Siday ku bilaabatay iyo sababta?
Ayaxa saxaraha ah, ama Schistocerca gregaria, ayaa caan ku ah taranka degdega ah iyo awooda ay dabayshu kula haajiraan masaafo dheer. “Xilliyada xasilloonida” waxay caadi ahaan joogaan saxaraha Afrika, Bariga dhow iyo Aasiya, sida ay sheegtay Hay’adda Cuntada iyo Beeraha. Laakiin inta ugu badan ee aadka u ba’an – waxa ay FAO u kala saartaa sida daacuunka – waxaa la og yahay in ay ku fidsan yihiin ilaa 60 waddan.
Xagaagii 2019, raxan raxan ayax ah ayaa ka soo gudbay Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ee Soomaaliya, halkaas oo ay ku naaloonayeen taran kale oo badan bilihii xigay, ayuu yidhi Cressman.
Waa dhacdooyinka duufaanada roobabka mahiigaanka ah ee u keenay saxaraha Carabta waa sanadaha 2018, 2019, 2020 sida ay u kala xigxigaan sawirka marka laga soo bilaabi dhinaca bidax.
Dabayaaqadii Disembar 2020, raxanihii ugu horreeyay ayaa billaabay in ay gaaraan dalka Kenya, iyaga oo si degdeg ah ugu fiday gobollada waqooyi iyo bartamaha dalka; Bishii Jannaayo 2020, Kenya waxay la kulantay cudurkii ugu xumaa muddo 70 sano ah. Jabuuti iyo Ereteriya ayaa sidoo kale uu ku bilaabmay inuu kusoo kordho cayayaanka ayaxa, 9-kii Febraayo, xasharaadka raxan ayaa bilaabay in ay yimaadaan waqooyi bari Uganda iyo waqooyiga Tanzaniya.
Raad-raac balaayada ayaxa
Sida laga soo xigtay Cressman, dhibaatada Ayaxa saxaraha ah waxay dib u soo bilaabatay Maay 2018, markii Duufaanta Mekunu ay dhaaftay saxare aadka u ballaaran oo aan cidi degganayn oo ku taal Jasiiradda Koonfureed ee Carabta oo loo yaqaan Quarter-ka Madhan, taasoo buuxinaysa meel bannaan oo u dhaxaysa godad ciid ah oo leh harooyin ephemeral ah. Sababtoo ah ayax saxaraha ah ayaa si xor ah ugu tarmo aagga, tani waxay u badan tahay inay dhalisay mowjadda hore. Dabadeed, bishii Oktoobar, Duufaanta Luban waxay ku dhalatay badhtamaha Badda Carabta, waxay u dhaqaaqday dhanka galbeed, waxayna ka dhacday isla gobolkaas oo u dhow xudduudda Yaman iyo Cumaan.
Duufaantan, gaar ahaan sanadka 2019, waxa ay ku xidhnayd Badweynta Hindiya Dipole, kaas oo u dhexeeya dawladaha togan, taban iyo dhexdhexaadka ah sida heerkulka baddu u wajahaayo guud ahaan Badweynta Hindiya. Marka Badweynta Hindiya, dabaylaha galbeedku waxay riixaan biyo diirran oo u dhow Australia, taasoo keenta roob dheeraad ah qaybta koonfureed ee qaarada. Marka ay togan tahay, galbeedku way daciifaan, taas oo u oggolaanaysa biyaha diirran-iyo roobka-ba inay u wareegaan Bariga Afrika.
Cyclone Mekunu hits the east coast of Africa on May 25, 2018. This might be one of the cyclones that has contributed to the swarms of locusts in East Africa.
PHOTOGRAPH COURTESY NASA WORLDVIEW
Intii lagu jiray dayrta 2018, Badweynta Hindiya Dipole waxay ahayd mid togan. Kadibna waxyar bay xumaatay dhowr bilood ka hor, waxay kor ugu kacday xaaladdeedii labaad ee ugu togan tan iyo 1870-kii dayrtii hore, sida uu sheegay Wenju Cai, saynisyahan cimilo-yaqaan ah oo ka tirsan wakaaladda sayniska qaranka Australia CSIRO. Xaaladaha Bariga Afrika iyo Australia labaduba ay soo mareen goor dambe ayaa ah waxa aan fileyno natiijada.
“Xilliyadii duufaannada kululaa ee keenay roobka culus ee Jasiiradda Carabta waxaa waday weji wanaagsan oo Badweynta Hindiya Dipole – qaab la mid ah taas oo kicisay abaarta rikoorka ah ee Australia,” ayuu yiri Bob Henson, oo ku takhasusay saadaasha hawada cimilada dhulka hoostiisa.
Cilmi-baadhis dhowaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in qaabkani uu ku noqon karo mid ku badan dunida kulaylka. Cai waxay ogaatay in xaaladaha ugu xun ee kaarboonka sii daaya, inta jeer ee dhacdooyinka Badweynta Hindiya ee aadka u wanaagsan ay kordhin karaan ku dhawaad ​​​​saddex laab dhamaadka qarniga. Daraasad dabagal ah oo lagu sameeyay 2018, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in haddii meeraha uu kululeeyo kaliya 1.5 digriiga- bartilmaameedka adduunku wuxuu ku gudbi karaa tobanka sano ee soo socda – wejiyada Dipole ee Badweynta Hindiya ayaa wali labanlaabmi kara. Marka loo eego Cai, waxaa horeba u jiray caddaymo muujinaya Badweynta Hindiya ee Dipole oo si togan guud ahaan u socda.
Haddii ay taasi horseedi doonto belaayooyin badan oo ayax ah waa su’aal furan, laakiin waa suurtagal walaac leh. Hababka wareegga badweynta marka laga soo tago, isbeddelka cimiladu waxa uu kululeynayaa badaha meel walba, kaas oo la filayo in uu kiciyo roobab aadka u xooggan. Badda Carabta, cilmi-baaris dhawaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in kulaylka adduunku uu durba ka dhigayo duufaannada dayrta kuwo aad u daran. Isla mar ahaantaana, cilmi-baadhisyo kale ayaa isbeddelka cimilada ku xidhay abaaraha sii xumaanaya iyo roobabka gabaabsiga ah ee guud ahaan Bariga Afrika, iyaga oo sawiraya sawir mustaqbal aan la hubin, laakiin mid hubaal ah ayaa ka khatar badan.
Iyadoo saynisyahannadu ay sii wadaan sahaminta halka cimilada Bariga Afrika ay ku wajahan tahay, hay’adaha gargaarka ayaa ku dadaalaya sidii ay uga hortagi lahaayeen dhibaatada Ayaxa inay ka sii darto. Bishii la soo dhaafay, FAO waxay ugu baaqday beesha caalamka inay lacag dhan 76 milyan oo dollar ku bixiso hawlgallada ka hortagga cayayaanka iyo si loo ilaaliyo beeralayda iyo xoolo-dhaqatada shan waddan oo uu ku habsaday Ayaxu. Cressman wuxuu ku rajo weyn yahay in lacagta ay iman doonto, laakiin wuxuu ka walaacsan yahay waqtiga. Sida cayayaanku sii wadaan inay tarmaan, baahida gargaarka ayaa si weyn kor ugu kici karta, gaar ahaan haddii aan si dhakhso ah loo hirgelin tillaabooyinka xakamaynta.
Maxaa qorshe ah ay sameyn kartaa dowladda Soomaaliya si loo badbaadiyo dalagyada beeralayda Soomaaliyeed?
Diblomaasi.com ayaa su’aashaan hor dhigtay Cabdijabaar Sh. Axmed oo ah macalin jaamacadeed oo ka tirsan Jaamacadda Dowladda iyo Dhaqaalaha, “Jawaabta kaliya ee wax ku oolka ah ee ay dowladda Soomaaliya qaban karto waa in hawada si toos ah loogu buufiyo sunta cayayaanka si ay u disho ayaxa loona badbaadiyo dalagyada muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waddamada ay ka midka yihiin Kenya iyo Itoobiya ayaa sidoo kale buufinaya.” ayuu yidhi
“Istaraatiijiyadu lagu badbaadinaayo dalagyada beeralayda Soomaaliyeed waa inay noqotaa sidii loo soo afjari lahaa masiibadaan sii kordhayso.” ayuu yidhi
Bishii Janaayo, FAO waxay beesha caalamka ka codsatay 76 milyan oo doolar si ay ula dagaallamaan ayaxa Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale dalalka uu dhowaan saameeyay ee Jabuuti iyo Eritrea. Ururka Q.Midoobe ayaa sheegay in ilaa hadda lagu yaboohay 22 milyan oo doolar lacagahaan maxaa ka soo gaaray soomaaliya, mise yabooh miyaan ku jiraynaa nolosheena inta ka dhiman!
Falanqeyn: Xaaladda cakiran uu dalka ku jiray awgeed, Rooble waxaa loo magacaabay inuu dejiyo xiisadaha siyaasadeed si uu u gaarsiiyo doorashooyin, jadwal cusub oo codbixinna waa laga sugaayay.
Waxaa xalay markii ugu horeysay tan iyo bartamihii bishii tagtay kullan fool ka fool ah yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Kullankan oo ka dhacay xarunta Madaxtooyada ayaa waxaa dhex-dhexaadiye ka ahaa Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen.
Kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay in lagu xaliyo khilaafka labada mas’uul ee ka dhashay arrinta kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo taliyeyaasha Nabad-Sugidda ee ay kala magacaabeen madaxweyne Farmaajo iyo ra’isal wasaarihiisa Rooble.
Ma rabno inaan abuurto cabsi’
Waxay ahayd markii labaad oo ay labadan qof isku qabsadaan maalmihii u dambeeyay arrimo la xiriira shaqaalaysiin iyo is-rasaasayn ka dhex dhacday hay’adaha amniga ee Soomaaliya, taasoo sare u qaadday cabsida laga qabo loolan awood oo dhan walba ah oo ka dhaca heerarka ugu sarreeya ee dawladda.
Horraantii bishii sebteembar, Rooble ayaa xilkii ka qaaday taliyihii Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka Soomaaliyeed (NISA) kadib markii uu maareeyay baaritaan aad u culus oo lagu waayay gabar dhallinyaro ah oo ka tirsanayd hay’adda NISA.
Farmaajo ayaa sheegay in xil ka qaadistu ay tahay “sharci darro iyo mid aan dastuurka waafuqsaneyn” wuxuuna meesha ka saaray ra’iisul wasaarihiisii, isaga oo qof kale u magacaabay xilka ugu sarreeya, wuxuuna u magacaabay taliyihii sirdoonka ee la tuuray inuu noqdo lataliyihiisa amniga qaranka.
Rooble ayaa ku eedeeyay Farmaajo inuu “is hortaag ku sameeyay” baaritaankii lagu waday basaaskii la waayay wuxuuna ka digay in faragelinta lagu hayo hay’adaha caddaaladda ee Soomaaliya ay dalka ku hayso “halis jirta”.
Is -maandhaafka ayaa sare u qaaday heerkulka siyaasadeed ee Muqdisho iyo cabsi laga qabo rabshado, iyadoo la arkay cutubyo ciidan oo ka agdhow xafiiska Farmaajo oo fadhiya bannaanka xarunta NISA. – Taliyaha guud ee ciidanka booliska Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in xaaladdu ay degan tahay oo gacanta lagu haayo.
“Waxaa muhiim ah dalkeenna iyo nabadgelyadeenna; waa doorashada iyo midnimadeenna ayaa muhiim ah. Ma doonayno inaan cabsi abuurno, dadkuna waa inaysan argagaxin maxaa yeelay ciidamadeenna amniga ayaa awood u leh inay xaqiijiyaan xasilloonida dalka,” ayuu yiri.
Rooble oo ah Injineer madaniga ah oo ay soo tabbabartay Iswiidhan isla markaana ku cusub siyaasadda, Rooble waxaa RW u magacaabay Farmaajo bishii Sebteembar ee sannadkii hore ka dib markii ra’iisul wasaarihii ka horeeyey xilka looga qaaday codka kalsoonida baarlamaanka. Laakiin labada nin ayaa marar badan isku dhacay, iyadoo ay jirtay carqalad ku imaan karta geedi-socod doorasho oo awalba nugul taasoo ku ridi karaysay khatar qoto-dheer.
Beesha caalamka ayaa ku dhiirri-gelisay labada hoggaamiye inay xoogga saaraan doorashooyinka, oo durba sanad dib uga dhacday xilligii loo asteeyay.
“Waxaan ku boorinaynaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay dejiyaan iska-horimaadka siyaasadeed ee ku xeeran baaritaankan, gaar ahaanna ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara rabshado,” ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray Hawlgalka Kaalmaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, bishii sebteembar.
Bishii abriil baarlamaanka Soomaaliya ayaa xil-kordhin u sameeyey MD Farmaajo. Xil-kordhintaasi waxay keentay in dariiqyada Muqdisho ka billaabmeen dagaallo dhimasho badan dhaliyay, iyada oo musharaxiinta kasoo horjeeday MD Farmaajo ay u arkeen awood-sheegasho cad.
Xaaladda cakiran uu dalka ku jiray awgeed, Rooble waxaa loo magacaabay inuu dejiyo xiisadaha siyaasadeed si uu u gaarsiiyo doorashooyin, jadwal cusub oo codbixinna waa laga sugaayay.
Laakiin howsha ayaa dib u dhacday, Rooble ayaa ku eedeeyay Farmaajo inuu isku dayay inuu ka soo ceshado “mas’uuliyadda doorashada iyo amniga”.
Qaabka Doorashooyinka Soomaaliya ma ahan nidaam dunida ka jira ee waa nidaam la is yiri ‘armay ku heshaan, waxay raacaan qaab dadban oo adag, kaas oo golayaasha sharci dejinta ee dawladda iyo ergooyinka qabaa’ilku ay soo xulaan xildhibaannada baarlamaanka qaranka, kuwaas oo iyaguna dooranaya madaxweynaha. Wejiga xiga ayaa la qorsheeyay inta u dhaxaysa Oktoobar 1 iyo Noofambar 25. Laakiin xaalka doorashooyinka uma socdaan maanta sida la rabay.
Xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in is-mariwaaga doorashada uu ka weeciyay dhibaatooyinka waaweyn ee Soomaaliya, oo ay ugu weyn tahay kacdoonka rabshadaha wata ee Al-Shabaab. Xulafada al-Qaacida waxaa laga saaray Muqdisho tobban sano ka hor laakiin waxay weli gacanta ku hayaan dhul baaxad leh waxayna sii wadaan weerarada dilalka ah ee ka dhaca caasimadda iyo meelo kale.
Hay’adda NISA ayaa sheegtay in sarkaalka sirdoonka ah laga afduubtay meel u dhow gurigeeda bishii Juun ay dileen xagjiriinta Al-shabaab. Laakiin Al-Shabab ayaa beenisay inay wax door ah ku lahayd dilka Ikraan Tahliil oo 25-jirka ah, oo qoyskeedu ay NISA ku eedeeyeen inay dishay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Jabuuti Jimcihii inay si sharci-darro ah u xirtay la-taliyihiisii ​​amniga qaranka, oo ah kaalin muhiim ah oo ka mid ah is-maandhaafka ka dhex aloosan hoggaanka sare ee Muqdisho kaasoo ku hanjabaya inuu dalka gelin doono qalalaase cusub.
Khilaafka ayaa cirka isku sii shareeray markii Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, uu hakiyay awoodihii fulinta ee Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble – tallaabadaas oo ra’iisul wasaaruhu si degdeg ah u diiday “sharci darro”.
Labadani waxay isku khilaafeen magacaabisyada kala duwan ee bishan, oo uu ku jiro la-taliyihii amniga qaranka Fahad Yaasiin, iyadoo is-maandhaafkoodu halis ku yahay amniga dalka iyo geedi-socodka doorashada.
Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) ayaa goor dambe oo Jimcihii ah soo saaray bayaan uu uga digayo in xiisaddu ay “wiiqi karto xasilloonida Soomaaliya oo ay marin habbaabin karto hannaanka doorashada”.
UNSOM ayaa sidoo kale ku boorisay madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha “inay si degdeg ah u xalliyaan khilaafaadkooda, iskana ilaaliyaan is-weydaarsiga aan faa’idada lahayn ee hadallada dadweynaha iyo ogeysiisyada hay’adaha maaliyadda, ka fogaadaan tallaabo kasta oo khalkhal gelin karta xaaladda amniga, iyo inay xoogga saaraan sidii loo soo gabagabeyn lahaa doorashooyinkii waqtigoodu dhacay oo dib u dhac farabadan uu ku yimaaday.
Saaxiibka dhow ee madaxweynaha Soomaaliya, Fahad Yaasiin ayaa keenay isqabqabsiga khilaafka cusub e u dhaxeeya RW iyo Madaxweynaha. Jimcihii markii xafiiska Farmaajo ku eedeeyay Jabuuti inay si sharci darro ah isaga iyo mas’uuliyiin kale oo Soomaali ah ugu xirtay gegida dayuuradaha caalamiga ah ee ugu weyn dalkaas.
“Waxaan ka codsaneynaa dowladda Jabuuti inay fududeyso … safarkooda, iyada oo si buuxda mas’uul uga noqon doonta wixii khatar ku ah nabadgelyadooda shaqsiyeed. Aad baan uga niyad jabnay faragelinta qaawan,” ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska Farmaajo.
Laakiin Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa beeniyay eedeymahaas, isagoo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: “Waxaa jira warar been abuur ah oo lagu baahiyay baraha bulshada oo isku dayaya inay abuuraan jahwareer iyo inay Jabuuti u jiidaan caqabadaha gudaha iyo dhibaatooyinka gudaha ee Soomaaliya.”
Waxa uu sheegay in duulimaadkii Turkish Airlines ee Muqdisho aysan ka duulin Jabuuti sababo la xiriira waxa ay shirkaddu ku tilmaamtay “cilado farsamo”, isagoo intaa ku daray in mid ka mid ah duuliyeyaasha aan loo oggolaan inuu ka soo dego caasimadda Soomaaliya, taasoo ka dhigan in dhammaan rakaabkii ay qasab ku noqon doonaan inay soo laabtaan. ilaa Istanbul.
Si kastaba ha ahaatee ma uusan xusin Fahad Yaasiin, oo Sabtida lagu waday inuu ka qeybgalo shirka amniga qaranka ee Muqdisho, mana cadda in uu ku jiray duulimaadkaas iyo in kale.
Shirkadda Turkish Airlines ayaan wax hadal ah ka bixin markii ay la soo xiriirtay wakaaladda wararka ee AFP.
“Waxaan sii wadi doonnaa inaan garab istaagno walaalaheenna Soomaaliya laakiin marnaba ma faragelinno arrimahooda gudaha,” ayuu yiri Yuusuf.
Khatarta ‘xasilooni darrada’
Khilaafka xudduudaha ayaa qarxay saacado kadib markii madaxda shanta dowlad-goboleed ee Soomaaliya ay ku boorriyeen Rooble iyo Farmaajo inay khilaafkooda ku xalliyaan dhex-dhexaadin.
“Khilaafka hadda jira … uma adeego danta guud, wuxuu horseedaa amni-darro iyo xasilooni-darro siyaasadeed,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka madaxda Jubaland, Koonfur -galbeed, Galmudug, Hirshabeele iyo Puntland.
Loolanka awoodeed ee labada masuul ayaa soo shaac baxay toddobaadkii hore markii Rooble uu shaqada ka ceyriyay Fahad Yaasiin, oo xilligaas ahaa madaxa sirdoonka Soomaaliya, kadib markii uu ka shaqeeyay baaritaan heer sare ah oo lagu waayay gabar sirdoon ah oo dhallinyaro ahayd.
Qoyska Ikraan Tahliil ayaa ku eedeeyay shaqaaleyaheeda Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka inay dileen.
Farmaajo ayaa ka adkaaday ra’iisul wasaare Rooble, isagoo Fahad Yaasiin u magacaabay la-taliyihiisa amniga qaranka, wuxuuna khamiistii ku dhawaaqay inuu ka noqonayo awoodaha RW Rooble, gaar ahaan kartida shaqaalaysiinta iyo shaqo ka eryidda mas’uuliyiinta, ilaa ay ka dhammaato hannaanka doorashada.
Waxa uu ku eedeeyay Rooble in uu ku xadgudbay dastuurka oo uu qaatay “go’aamo aan laga fiirsan oo u gogol xaari kara xasillooni darro siyaasadeed iyo mid amni”.
Rooble ayaa ku eedeeyay Farmaajo inuu doonayo inuu kharribo shaqada dowladda.
Soomaaliya ayaa muddo bilooyin ah la daalaa dhaceysay doorasho aan wakhtigeeda ku dhicin. Farmaajo ayaa damcay inuu xilka ku darsado, sidoo kale baarlamaanka ayaana u kordhiyay bishii Abriil, taasoo dhalisay dagaallo dhimasho badan dhaliyay oo ka dhacay Muqdisho, iyadoo qaar ka mid ah kuwa la tartamayay ay u arkeen awood-sheegasho cad.
Rooble ayaa isku geeyay jadwal cusub oo doorasho, laakiin hannaanka ayaa dib u dhacay, khamiistii ayuu ku eedeeyay Farmaajo inuu isku dayay inuu ka leexiyo.
Doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxay u dhacaan qaab dadban oo adag, kaas oo ogolayaashaha sharci dejinta ee dawladda iyo ergooyinka qabaa’ilku ay soo xulaan xildhibaannada baarlamaanka qaranka, kuwaas oo iyaguna dooranaya madaxweynaha.
Wejiga xiga ee doorashad ayaa loo qorsheeyay 1 Oktoobar-25-ka Nofeembar iyadoo la qabanayo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka, laakiin weli codbixinta ayaan ka dhicin qaar ka mid ah dowlad-gobolleedyada aqalka sare sidii horay loo qorsheeyay.
Xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in is-maandhaafku uu ka weeciyay dhibaatooyinkii waaweynaa ee Soomaaliya, gaar ahaan kacdoonkii Al-Shabaab.
Xulafada Al-Qaacida waxaa laga saaray Muqdisho tobban sano ka hor laakiin waxay weli gacanta ku hayaan dhul baaxad leh waxayna sii wadaan weerarada dilalka ah ee ka dhaca caasimadda iyo meelo kale.
“Kooxaha Soomaaliya waxay ku ciyaarayaan dab. Dhammaan dhinacyadu waxay u baahan yihiin inay is-dejiyaan,” ayay kooxda xasaradaha caalamku ku sheegtay warbixin ay soo saartay horaantii toddobaadkan.
“Haddii madaxda Soomaalida ay wanaaga wax ka fiiriyaan oo ay xoogga saaraan dhisida iyo badbaadinta nolosha dadka iyo dalka iyagaba isma qilaafeen “
Soomaaliya kuma cusba xasillooni-darrada: Iyada oo muddo dheer ay socdeen kacdoonno Islaami ah iyo doorashooyin muddo bilooyin ah qaata, wuxuu dalka hadda wajahayaa in halista colaaddeed oo soo cusboonaata sababtoo ah waxaa sii kordhaya is-maandhaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha.
Qoraalkaan falanqeynta ah waxaan ku eegeynaa sababta uu xiriirkii Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed uu si deg deg ah u xumaaday iyo waxa ku soo fool leh waddanka Geeska Afrika oo markii horeba aan xasilloonayn.
“Iyada oo muddo dheer ay socdeen kacdoonno iyo doorashooyin muddo bilooyin ah qaatay waddanku wuxuu hadda wajahayaa halis colaadeed oo hor leh.”
Marka hore aan isla qiimeyno Xiriirka RW iyo MD?
Khilafaadka u dhaxeeya madaxda ugu sareyso ee Soomaaliya ma aha arrin cusub, Rooble oo ah injineer madani ah oo lagu soo tababaray dalka Sweden, ayaa madaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka dhamaaday Farmaajo, ayaa hadda soo dhexgalay madmadow siyaasadeed, kaasoo uu u magacaabay ra’iisul wasaare bishii Sebteember ee la soo dhaafay.
Farsamo-yaqaan Rooble ayaa u muuqda inuu gadaal mindi kaga taagay Farmaajo oo siyaasadda ku xeel-dheer, kaasoo ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda oo isaga laftiisu noqday ra’iisul wasaare ka hor inta uusan noqon madaxweynaha.
Madaxweyne Farmaajo ayaa kordhiyey xilkiisa bishii Abriil isaga oo aan doorasho qabanin, taas oo dhalisay rabshadihii siyaasadeed ee ugu xumaa ee dalka ka dhaca muddo sanado, wuxuuna u jeestay dhinaca RW Rooble si uu gacan uga geysto dejinta xaaladda isaga oo ka codsaday in uu abaabulo doorashooyinka baarlamaanka.
RW xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaqa-joojin ku sameeyay agaasimaha hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-Sugidda Qaranka Fahad Yaasiin, sida lagu xaqiijiyay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska Ra’isul Wasaaraha.
Rooble ayaa faray Fahad Yaasiin in muddo sadex maalmood gudahood ah uu xilka hay’adda NISA ku wareejiyo. Ra’isul Wasaare Rooble ayaa Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac oo hore u soo noqday agaasimaha NISA si ku-meel gaar ah ugu magacaabay agaasimaha NISA. Ra’isul Wasare Rooble ayaa sidoo kale faray xeel-ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka inuu baaritaan rasmi ah oo dhameystiran ku sameeyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaal u shaqeynaysay Hay’adda NISA, kaddibna horgeeyoo ‘Maxkamad sharci ahoo awood u leh’.
Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Somaliya, Madaxweynaha JFS oo ilaalinaya masuuliyadda ka saaran joojinta tillaabo kasta oo dhiirrigelin u noqon karta kooxaha arrgaxisada, wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga.
Markii Rooble sumcadiisu sare u kacday, wuxuu bilaabay inuu Farmaajo ku xujeeyo arrimo dhowr ah, taasoo ka careysiisay madaxweynaha.
Wuxuu booqday Kenya bishii la soo dhaafay, isagoo calaamad u noqday dhalanteedka xiriirkii diblomaasiyadeed ee dowladda Kenya iyo Soomaaliya, maalmo ka dib markii Farmaajo ka mamnuucay hay’adaha dowladda ama mas’uuliyiinta inay heshiis la galaan waddamo ama hay’ado shisheeye ilaa doorasho laga qabanayo.
Rooble ayaa markaas la wareegay Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka Soomaaliyeed ee awoodda badan (NISA) toddobaadkii hore, isagoo dhaleeceeyay sida ay u maareysay baaritaan heer sare ah oo ku aaddan masiirka sarkaalka 25-jirka ah, Ikraan Tahliil, kiiska gabadhaas ayaa dhaliyay qaylo-dhaan.
Qoyska Ikraan Tahliil ayaa ku eedeeyey NISA inay iyada dishay – aragtidaas oo ay taageereen Soomaali badan oo baraha bulshada qabsaday si ay u cambaareeyaan wakaaladda una dalbadaan caddaalad.
Markii Rooble uu shaqada ka ceyriyay agaasimihii NISA, Fahad Yaasiin, oo aad ugu dhowaa Farmaajo, madaxweynuhu si dhaqso leh ayuu uga falceliyay, isagoo markii hore soo celiyey ka dibna u dallacsiiyey saaxiibkii hore jagada lataliyaha amniga qaranka.
Ra’iisul wasaaraha ayaa ka jawaabay isagoo ku eedeeyay Farmaajo inuu “is -hortaag ku sameeyay” baaritaanka, wuxuuna sheegay in arrimahan ay muujinayaan “halista jiritaanka nidaamka dowladnimo ee dalka”.
Xagee wax marayaan hadda?
Dacwadda reerka Ikraan Tahliil ayaa sare u qaaday xiisadaha Muqdisho, halkaas oo Arbacadii lagu arkay cutubyo ciidan oo ku dhow xafiiska Farmaajo oo fadhiya bannaanka xarunta NISA.
Is-qab-qabsiga ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay hay’adaha kala duwan ee dowladda, iyadoo mid ka mid ah saraakiisha NISA uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in saraakiisha sarsare ay u muuqdeen inay dhinacyo isu xik-xiksanayaan.
Mid ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in wariyeyaasha ka howlgala warbaahinta dowladda ay farayaan inaysan baahin farriimaha Farmaajo.
Habbeenkii Arbacada, jahwareerka siyaasadeed waxay sii kordheen markii Rooble uu xilkii ka qaaday wasiirkii amniga Xasan Xundubey Jimcaale kuna beddelay dhaliilihii Farmaajo, isagoo sheegay in tallaabadani ay “dib u soo noolaynayso” wasaaraddii muhiimka ahayd, oo dusha kala socotay dhammaan hay’adaha amniga, booliiska iyo sirdoonka.
Rooble ayaa ka qeyb galay dhaarinta Wasiirka cusub ee Amniga Gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxaana goob-jooge ka ahaa Wasiirka Caddaaladda ee XFS Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhaariyay wasiirka cusub.
Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qeyb galay dhaarinta Wasiirka cusub ee Amniga Gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxaana goob-jooge ka ahaa Wasiirka Caddaaladda ee XFS Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhaariyay wasiirka cusub. Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay in uu si hufan u guto howsha muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka.
Madaxweynuhu wuxuu ku tilmaamay go’aanka mid aan waafaqsanayn dastuurka, halka wasiirkii xilka laga qaaday uu Rooble ku eedeeyay inuu dalka u jiiday “colaad cusub”.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka horyimid dhaarintii maanta ee Wasiirka cusub ee amniga, sheegayna inay baalmarsan tahay sharciga.
Mursal ayaa ku dooday in dhaarinta xubnaha Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka lagu hor dhaariyo Golaha Shacabka, taasi oo ku sheegay inay iskugu jirto ansixin iyo dhaarin wada socda.
“Waxaan si xushmad iyo qadarin leh kuula socodsiinayaa in ay Golaha Shacabka soo gaartey in Wasiirka magacaaban uu dhaariyey maanta Wasiirka Cadaalada ee Xukuumadaada iyadoon wax ansixin ah laga codsan Golaha Shacabku si waafaqsan Qodobka 69 (d) iyo 100aad farqadiisa (C) ee Dastuurka Federaalka iyo qodobka 104-aad ee kusaabsan dhaar marinta xubnaha Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka” ayuu yiri Guddoomiye Mursal.
“Mudane Ra’iisul Wasaare, si aad ula socoto, dhaarinta xubnaha Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka lagu hor dhaarinaayo Golaha Shacabka ma aha keliya dhaarmarin ee waxay isgu jirta ansixin iyo dhaarin si xubnaha ay xilalkooda xafiiseed rasmi ahaan u bilaabi karaan. Dhaqan ahaanna haddu kalfadhiga furan yahay Kulanka guud ee Golaha ayaa lagu ansixiyaa laguna dhaariyaa. Haddiise u kalfadhiga Golaha markaa uu xiranyahana waxaa lagu ansixiyaa laguna hor dhaariyaa Guddiga Joogtada oo ka wakiil ah Golaha Shacabka,” ayuu ku daray.
Sidoo kale waxa uu dhaarinta wasiirka amniga ee maanta ku tilmaamay mid uu iska watay Ra’iisul Wasaaraha, oo asagu hore u soo magacaabay, ansixiyey, haddana dhaariyey, kadibna xilka ku wareejiyay.
“Hadda sida ay u muuqato, xubin ka mid ah Golaha Fulinta ayaa magacawday, ansaxisay isla markaana dhaarisey isla xubin iyaga ka mid ah, taas oo si cad u baalmarsan kala soocnaanta Xilalka iyo Awoodaha Hay’adaha Dawlada ee Laanta Sharci Dajinta, Laanta Fulinta iyo Laanta Garsoorka iyo qodobada Dastuuriga ah ee aan kor ku soo xusnay. Waxa kale oo xusid mudan inaanu dalka ka jirin firaaq Baarlarnaani ah si waafaqsan Sharci Lr. 30 ee xeeranayo in Baarlamaanka 10aad ee hadda jooga oo wata awoodihiisa Dasturiga ah u dhamaytiran tahay ay Xilka sii haynayaan inta Baarlamanaan kale lag adooranayo.”
Mursal ayaa ugu dambeyntii ka codsaday Ra’iisul Wasaaraha in uu si qoto dheer uga baaran dego tallaabooyinka uu qaaday, asaga oo mudnaanta koowaad siinaya xasiloonida siyaasadeed iyo kala dambeynta nidaam dowladeed, ee u baahan yahay dalkeen oo maraya marxalada xasaasiga ah.
Maxaa horyaala oo xal u ah labada masuul?
Dad badan ayaa ka baqaya in dib-u-dhac hor leh ay u keeni doonta doorashad dalka oo markii horeba nuglayd, halis qoto-dheerna ka dhalan karta.
Wejiga xiga ee doorashada dadban oo codbixin ah, ayaa lagu wadaa inay u bilaabato aqalka hoose ee baarlamaanka inta u dhexeysa Oktoobar 1-keeda ilaa 25 -ka Nofeember ee sanadkaan.
Laakiin ma cadda goorta uu baarlamaanku dooran doono madaxweynaha cusub.
“Khilaafkan haddii aan si wanaagsan lagu xalin, wuxuu sii murjinayaa dadaal kasta oo kale oo siyaasadeed oo socda oo ay ku jirto hannaanka doorashada, oo dib u dhici doona haddii aan gebi ahaanba la joojin,” ayuu yiri Cabdiqani Cumar, oo horay u ahaan jiray sarkaal sare ayaa u sheegay wakaaldda AFP.
Rooble ayaa horay ugu eedeeyay Farmaajo inuu isku dayay inuu soo ceshado “doorashada iyo mas’uuliyadda amniga” ee lagu aaminay horaantii sanadkan.
Iyadoo mujaahidiinta Al-Shabaab ay maamulaan dhul ballaaran oo gudaha dalka ka tirsan, madaxdii dalkana isqabqabsi iyo qalallaase siyaasadeed ay ka dhammaan la’dahay waad garan kartaa halka ay ku dhammaan doonto.
Hay’adda sirdoonka Soomaaliya ayaa ah hubka lagama maarmaanka u ah dagaalka ay kula jirto kooxaha Al-Qaacida ee xiriirka la leh, kuwaas oo si dhaqso leh uga faa’iideysan doona daciifnimo kasta oo soo wajahda dowladda dhexe.
Maleeshiyaadka al-shabaab waxay durbadiiba dhex galeen khilaafaadka siyaasadeed, iyagoo soo saaray diidmo deg deg ah – oo aan caadi ahayn markii NISA ay sheegtay in sarkaalkeedii dhallinyarada ahaa ee Ikraan Tahliil ay kooxdu dishay.
Beesha caalamka ayaa ka walwalsan, iyadoo Qaramada Midoobey, Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Mareykanka, Midowga Yurub iyo urur goboleedka Bariga Afrika ee IGAD ay ka mid yihiin kuwa ku boorrinaya labada nin inay joojiyaan muranka oo ay xoogga saaraan dalka.
Toban sano ka dib markii Muqdisho laga saaray dagaalyahannadii xiriirka la lahaa Al-Qaacida, dowladdu waxay gacanta ku haysaa qayb yar oo dalka ka mid ah, iyadoo gacan weyn ka geysatey ilaa 20,000 oo askari oo ka tirsan AMISOM.
“Waxaan dib u aragnay bishii Abriil sida ugu dhakhsaha badan ee ay Muqdisho ku noqon karto tiyaatar loogu talagalay ciidamada millateriga ee iska soo horjeeda iyadoo ay jirto burbur siyaasadeed oo ballaaran,” ayuu yiri Cumar Maxmuud, oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan Kooxda Xasaradaha Caalamiga ah (ICG).
Labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa midkood awoodi kari waayay in khilaafkoodu xakameeyaan: Labada waddan ee Geeska Afrika waxay wadaagaan soohdin dhuleed oo aad u dheer waxayna leeyihiin xiriir dhaqan dhaqaale.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, oo kawada hadlaayo xiriirka labada. (Midig) madaxweyne Maxamed Cabdilahaai Farmaajo, (Bidix) madaxweyne Uhura Kenyatta
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in Soomaaliya ay dib usoo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay kala dhaxeeya dalka Kenya kadib markii ay xiriirka u jartay bishii Deseembar ee sanadkii tagay
Xukuumadda Nayroobi ayaa dhankeeda war qoraal ah ku sheegtay inay dooneyso inay wanaajiyaan xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo aanan ka bixinin wax qeexitaan ah oo sidaas usii dheer.
Dhanka kale, xukuumadda Muqdishu ayaa sidoo kale ku eedeysay Nayroobi inay faragalin ku samaynayso howlaha doorashada ee Jubaland, oo ahmaamul ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya oo qeyb ka ah howlgalka AMISOM.
“Waxay ku saabsan tahay aasaaska in dalna aan dal kale farogelinin, in derisnimada la ixtiraamo, in waddan kasta aanu fulin tallaabo wax u dhimaysa xornimadiisa,” ayuu yiri Wasiir Al-Cadaala.
Xiriirka labada dal ayaa gaaray heerkii ugu xumaa sanadkii la soo dhaafey, kadib markii uu dib u cusboonaaday muranka la xiriira lahaanshaha qaybta ugu sareysa dhinaca badda. Halgan dheer ka dib kiiska oo dacwaddiisa ka socotaa maxkamada Cadaaladda Adduunka inkasta oo ay Kenya qaadacday.
Goormuu ayuu khilaafkan soo xoogaystay?
Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa ah xiriir laba geesood ah oo ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Bishii Diseembar 2020, Soomaaliya waxay xiriirka u jartay Kenya. Bishii Meey 2021, xiriirkii labada dal waa la soo celiyey, iyadoo dhexdhexaadin laga helay dowladda Qadar.
Xiriirka labada dal ayaa heerkii ugu xumaa gaaray sannadkii la soo dhaafay, kaddib markii uu soo cusboonaaday muranka la xiriira lahaanshaha qeybo ka mid ah dhinaca badda. Muranka dhanka badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa in muddo ah soo jiitamayay, waxaana sannadkii 2015-kii ay dowladda Soomaaliya u gudbisay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ.
Dacwadaasi ayaa weli hortaalla maxkamada ICJ, waxayna garsoorayaasha oggolaadeen in maxkamaddu ay dhageysan karto dacwadda la xiriirta arrintan, in kastoo Kenya ay dooneysay in arrintaan lagu dhameeyo qaab is-fahan ah oo ka madaxbannaan maxkamadda. Arrintan ayaa soo billaabatay markii uu soo shaac baxay khilaafka dhanka xuduudda badda ee u dhaxeeya labada dal.
Dowladda Soomaaliya ayaa horraaantii sannadkan joojisay duullimaadyada rakaabka iyo jaadka Kenya taas oo qeyb ka ahayd tallaabooyinka lagu xakameynayay fafitaanka COVID-19.
Kenya ayaa maalin walba Soomaaliya u dhoofin jirtay jaad kaas oo loo iib geeyo magaalooyinka kala duwan ee dalka.
Sida uu qoray wargeyska The Foreign Policy, 15 diyaaradood oo ah nuuca jaad wadda ayaa maalin walba ka degi jirtay magaalooyin badan oo Soomaaliya ah, waxaana ganacasatada Kenya sannadkiiba la sheegay in ay ka heli jireen lacag gaareysa $144 milyan oo doollar.
Soomaaliya waxay sidoo kale ku hanjabtay inay ka baxeyso Urur Gobaleedka IGAD, ka dib markii guddi xaqiiqo raadin ah ay u tageen Jubbaland dhibaatada ka dhacday ay soo sheegeen wax caddeyn ah oo muujinaya in Kenya ku xadgudubtay madaxbanaanida Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Maxamed C / risaaq ayaa diiday warbixinta, wuxuuna sheegay in baarayaasha ay yihiin “eex, eex, cadaalad daro, tanaasul iyo in la sii qorsheeyay in Kenya la cafiyo.”
Ergo xaqiiqo raadin ah ayaa waxaa abuurtay Urur Goboleedka IGAD (Igad) kadib markii dowladda Kenya lagu eedeeyay in gudaha dalkeeda ay ku sugan yihiin jabhado kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Cabdirashiid Janan guddigaas iyagoo raadinaya faragalinta oo looga golleeyahay in lagu qaboojiyo xiisadaha u dhexeeya labada dal ee deriska ah.
Bishii Diseembar 15keedii, Soomaaliya waxay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Kenya waxayna warqad u qortay urur-goboleedka oo ka kooban sideed xubnood, kana dalbatay ergo madax-bannaan oo xaqiijiso sheegashooyinka ah in Kenya ay hubeyso oo ay tababbarayso maleeshiyo si ay ula dagaallamaan ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Gedo ee ku dhow xadka ay wadaagaan.
Kooxda ergada ah ee ka socday ururka IGAD oo hogaaminayeen safiirka Jabuuti u fadhiya Kenya Yacin Cilmi Bouh iyo dhigiisa Soomaaliya Aden Xassan Aadan, kooxdan oo sidoo kale uu kujiray kormeeraha IGAD, ayaa sheegay inaysan helin wax cadeymo ah oo taageeraya xadgudubyada Kenya.
Maxamed Cabdirazak, Wasiirka Arimaha Dibada iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya wuxuu sheegay in dalkiisa uu diidi doono warbixinta “gebi ahaanba” sababtoo ah baarayaasha waxay ahaayeen “eex, eex, cadaalad daro, tanaasul iyo in la sii qorsheeyay.”
“Soomaaliya waxay si adag u haysataa dhammaan eedeymihii ugu horreeyay ee ay u jeedisay Kenya waxayna raadin doontaa wax walba oo ay ku ilaalineyso madax-bannaanideeda,” ayuu Cabdirazak uu ku yiri hadal uu soo saaray, isagoo ku hanjabay in dalkiisu ka baxayo Igad.
Warbixinta gudiga IGAD u xilsaartay ayaa ku dhaleeceysay Soomaaliya inay xiriirka u jartay Kenya, iyadoo ku doodeysa in dhibaatooyin taariikhi ah oo soo food saaray labada dal lagu xallin karo oo keliya is afgarad diblomaasiyadeed oo qoto dheer.
Kooxdu waxay booqatay Muqdisho, Nayroobi iyo Mandheera, laakiin ma aysan booqan Gedo oo ku taal xadka ay la wadaagto Kenya halkaas oo laga soo sheegay dagaal u dhexeeya ciidamada XDS iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland ee uu madaxda ka yahay Cabdirashiid Janan, oo dowladda Muqdisho ay u aragto baxsad.
Kenya dhinaceeda, waxay diiday dhamaan eedeymaha uga imaanayay Soomaaliya, oo ay kamid ahayd in Ciidamada Difaaca Kenya ee howlgalka midowga Afrika ka tagayay xarumihii ay ka xoreeyeen Al-Shabaab, iyo waliba ku xadgudubka joogtada ah ee hawada Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Kenya ayaa sheegtay in natiijooyinka kooxdan ay caddeyn u tahay in sheegashada Soomaaliya ay tahay xeelad siyaasadeed oo loola jeedo in gobolka looga jeediyo arrimaha amniga. – “Warbixinta gudiga xaqiiqa raadinta waxay xaqiijineysaa xaqiiqda ah in eedeymaha Soomaaliya ay u jeedisay Kenya ay yihiin gebi ahaanba kuwo aan sal lahayn,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaarada.
Wasaaradda ayaa intaa sii raacisay, “Warbixinta dhexdhexaadnimada ah waxay si rasmi ah u xalisay arrinta, Kenya laguma soo jiidan doono ololaha taxaddar la’aanta ah ee ujeedkeedu yahay weli abuurista nabarro macmal ah oo loogu talagalay maslaxadda iyo arrimaha gudaha iyadoo laga hadlayo nabadda iyo amniga gobolka iyo is-dhexgalka gobolka.”
Howlgalka xaqiiqa raadinta ah ayaa sheegay in aysan jirin cadeyn ku filan oo muujineysa in Kenya ay martigalineyso maleeshiyada Soomaalida waxayna sheegeen in Amisom, oo xakameysa dhaq dhaqaaqa ciidamada ka howlgalaya howlgalkaasi, aysan muujin KDF dhaq dhaqaaq aan la ogoleyn.
Wakiiladu waxay sheegeen inay ogaadeen in ciidamada Cabdirashiid Janan ay saldhig ka dhigteen gudaha Soomaaliya iyagoo ka amar qaata ciidamada Jubbaland, halkii ay ka ahaan lahaayeen hay’ad banaanka ka joogta.
Guddigu wuxuu soo jeediyay in ciidamada Cabdirashiid Janan ay ‘ka saareen’ ciidamada federaalka kadib markii la geeyay gobolka Gedo sanadkii hore iyo khilaaf joogto ah oo kala dhaxeeya Jubbaland oo ku saabsan jiritaanka ciidamada qaranka ee Gedo.
Si kastaba ha noqotee, kooxdu waxay sheegtay in qorshahan uusan lahayn wax dhibaato ah maadaama qaab dhismeedka amniga ee Soomaaliya uu tan iyo bishii Maay 2017 aqbalay jiritaanka ciidamo goboleed oo ay weheliyaan booliska, si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dhanka kale, dowladaTurkiga ayaa boggaadisay dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. – “Waxaan soo dhoweyneynaa horumarada la xiriira dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan boggaadineynaa dadaalka dowladda Qadar ay ka geysaneyso howshan,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga.
Wasaaraddu waxay sheegtay in Turkigu uu sii wadi doono dadaallada lagu xallinayo khilaafaadka ka jira gobolka Geeska Afrika si waafaqsan wadahadal iyo is afgarad.
Kaddib muddo ka badan lix bilood oo la joojiyey, Soomaaliya waxay ku dhawaaqday inay dib u soo celineyso xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd deriskeeda, Kenya. Labada dal ee Geeska Afrika ayaa soo kala dhex galay khilaaf diblomaasiyadeed oo curyaamiyay nabadgelyada, waxbarashada iyo xiriirka ganacsi ee u dhexeeya.
Dhanka kale, labada dal ayaa sidoo kale ku muransan saaxadda amniga. Ciidamada Difaaca Kenya oo qeyb ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa wajahaya cambaareyn la sheegay inay bartilmaameedsadaan taawarrada isgaarsiinta, kuwaas oo muhiim u ah dhaqaalaha maxalliga ah maadaama aan loo isticmaalin keliya isgaarsiinta sidoo kale loo adeegsado ganacsi lacageed, iyagoo ku gabanaya weerarada ay geystaan kooxaha argagaxisada.
Yaa Kala Xisaabtamo Kufsiga ay Gaystaan AMISOM?
Dowladda Soomaaliya ayaanan illaa iyo hadda waxbo ka qabanin kiisaska kufsiga ee ay ku kacaan ciidamada Nabad Illaalinta ee Midowga Afrika – AMISOM. Dumarka kufsiga loo gaysto ayaa waxaa u badan kuwa danyarta ah.
Cudurka faafa ee ‘COVID-19’ wuxuu horseeday koror ku yimid rabshadaha ku saleysan jinsiga sanadkii la soo dhaafay dagaalyahanaduna waxay sii wadeen inay u adeegsadaan rabshadaha galmada “xeelad dagaal oo naxariis daro ah” iyo caburin siyaasadeed oo dalal dhowr ah ka jirta, madaxa UN-ka ayaa ku sheegay warbixin la faafiyay bishii abriil.
Warbixinta ayaa diirada lagu saaray 18 dal oo UN-ka ay sheegeen inay ka heleen macluumaad la xaqiijiyay. Waxaa ku taxan 52 ururo oo “si layaab leh looga shakisan yahay” masuuliyada “qaababka kufsiga ama noocyada kale ee rabshadaha galmada” ee isku dhacyada ajandaha Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay. In ka badan 70% dhinacyada la taxay “waa dambiilayaal joogto ah,” ayaa lagu yiri warbixinta.
Inta badan dadka ku jira liiska madow ee Qaramada Midoobay waa “jilaayaal aan dawli ahayn” – mucaaradka, jabhadaha ama kooxaha argagixisada ee ku xiran islaamka xagjirka ah ama kooxaha xagjirka ah ee al-Qaida. Milatariga qaranka ama ciidamada booliska ee liiska kujira, oo ay kujiraan milatariga Myanmar iyo ilaalada xuduudaha, ayaa laga mamnuucay inay ka qeybqaataan howlaha nabada ee Q.M.
“Liiska madow” sidoo kale waxaa ku jira ciidamada dowladda iyo kuwa booliska ee Koongo iyo Koonfurta Suudaan; ciidamada dowladda iyo kuwa sirdoonka ee Suuriya; ciidamada qalabka sida iyo xoogagga taageerada degdegga ah ee Suudaan; iyo ciidan iyo boolis Soomaalida ah iyo xoogag ka jira Puntland.
Wadamada liiska ku jira waxaa ka mid ah Koongo oo leh 20 kooxood; Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo leh 6; Mali oo leh 5; Koonfurta Suudaan iyo Suuriya oo min 4 ku leh; Suudaan oo leh 2; iyo Ciraaq iyo Soomaaliya oo min 1 leh.
“Rabshadaha galmada ah waxaa loo adeegsaday xeelad dagaal, jirdil iyo argagixisanimo oo goobaha ay ka jiraan dhibaatooyinka bani’aadamnimada iyo amniga, oo ay ka jiraan xagjirnimada iyo kordhinta hubka, oo aan sii wadin,” ayuu yiri Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres.
Gobolka Tigreega ee Itoobiya halkaasoo bishii Nofeembar uu ka qarxay dagaal u dhexeeya dowladda iyo Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray, Guterres wuxuu sheegay in ka badan 100 kufsi la sheegay.
Waxaa sidoo kale jiray warbixino laga naxo oo ku saabsan shakhsiyaad la sheegay in lagu qasbay inay kufsadaan xubno ka tirsan qoyskooda iyagoo u hanjabaya, haweenka ay ku qasbeen xoogaga militariga inay galmoodaan iyagoo u bedelaya badeecooyinka aasaasiga ah iyo rabshadaha galmada loo geysto haweenka iyo gabdhaha ku jira xeryaha qaxootiga, ”ayuu yiri.
Sida warbixino kala duwan ay sheegayaan Ciimada AMISOM waa kuwa kufsi badan ka gaysta gudaha Soomaaliya. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) waxaa loo diray ogolaanshaha Qaramada Midoobay sanadkii 2007 si ay gacan uga geysato taageerida dowladda federaalka ah ee xilligaas jilicsaneyd, dagaalka ayaa ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee dalal kala duwan oo leh awood ay ku xoojiyaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dagaalka ay kula jirto Al-Shabab. Askarta howlgalka waxaa ugu horreyn laga soo qaatay dalalka deriska ah – Uganda, Burundi, Kenya, Jabuuti iyo Itoobiya – halka maalgelinta ay bixinayaan Mareykanka, UK Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay. Qeybaha AMISOM waxay tababaro balaaran ka helaan macalimiinta militariga Ingiriiska iyo Mareykanka.
Iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyadda lagu kasbanayo quluubta iyo maskaxda, AMISOM waxay ka hawlgashaa qaybo caafimaad oo kala duwan oo ka imanaya gudaha xeryahooda milateri ee Soomaaliya. Haweenka isku dayaya inay ka helaan daawooyinka ama adeegyada bani’aadamnimada saldhigyada, si kastaba ha noqotee, waxay si joogto ah ula kulmeen dhiig-miirashada galmada ah, xadgudubyada iyo xitaa kufsiga askarta AMISOM.
Mama Caasha, oo ah qof u ololeeya xuquuqda aadanaha iyo lataliyaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeya dhibanayaasha kufsiga ee magaalada Muqdisho, ayaa u gaysay Faarax Aadan oo ah wariye wax ku qora wakaaladda foreignpolicyjournal.com si uu ula hadlo Zara, oo ka mid ah dhibanayaasha kooxdeeda taageertay ee ay kufsadeen afar askari oo ka tirsan midowga Afrika laba sano ka hor.
Saldhigga AMISOM, Zara – oo ku jirtay saddex-billaha labaad ee uurkeeda-waxay cudurradeeda iyo astaamaha canugga uga warantay dhakhtar ka tirsan AMISOM iyadoo loo marayo turjubaan Soomaali ah. Waxay iga qaateen ilmahaygii oo waxay siiyeen xoogaa boorash ah, ka dibna waxay i geeyeen teendho weyn oo ku taal geeska waxayna igu yidhaahdeen sug, ”ayay sii raacisay.
Toban daqiiqo ka dib, waxaa u yimid turjumaankii oo gadaashiisa socda, askari weyn oo ka tirsan Midowga Afrika. Turjubaanku wuxuu u soo bandhigay lacag si ay “xiriir” ula yeelato askariga laakiin Zara, oo u dhexeysa is diidsiin iyo xanaaq, ayaa si adag u diiday dalabkii waxayna iska caabisay askariga. Askariga ayaa markaa dagaal isu badalay oo wuxuu bilaabay hanjabaad.
“Waan ku qayliyey oo waxaan isku dayey inaan ka baxo teendhada laakiin wuu i soo jiiday,” ayay ku aastay wejigeeda gacmaheeda wayna ilmaysay.
Askariga ayaa markaa ka qaaday xijaabka kuna amray turjubaanka inuu ka baxo teendhada ka hor intaanu si xoog ah iskuula dul dhigin iyada. Wejigeedu wuu isbedelay oo gacmaheeduna way gariireen markii ay ka sheekaysay dhibaatadeedii.
“Waa O.K. gacaliso, “ayay tiri Mama Caasha,” waa OK.
“Waxaa la igula xiray katiinadda sariirta,” ayay Zara ku sii wadday iyadoo ooyaysa inta u dhexeysa baroorta, “Waan dhaqaaqi kari waayey, Waan ooyay. ” Sarkaalka, ayay tiri, wuxuu si xun u garaacay markii ay iska caabisay oo ay kufsadeen budh si adag gacmihiisa ugu dhegan.
Sheekada Zara waxay la socotaa markhaatiyada dhibbanayaasha kale ee kufsiga loo geysto ee ku jira xeryaha saldhigga AMSIOM oo ay diiwaangelisay Hay’adda Xaquuqul Insaanka ee Human Rights Watch (HRW). Warbixinta oo ka kooban 71 bog, “Awoodda ay nimankaasi inagu leeyihiin”, HRW waxay soo bandhigtay cadeymo muujinaya ku takrifal dumar ah oo ay geysteen askarta Midowga Afrika waxayna diiwaan galisay heerar sare oo ah kufsi, galmo iyo ku takrifal, iyadoo sheegtay in askarta AMISOM “ay ku xad gudbeen meelaha ay awooda ku leeyihiin si ay u ugaarsadaan haweenka iyo gabdhaha ugu nugul magaalada. ”
Sida lagu sheegay warbixinta, askarta AMISOM waxay ka ganacsan jireen cunnooyinka, galmada iyo haweenka iyo gabdhaha ay kufsadeen kooxaha burcad-badeedda ah ee da’doodu ka yar tahay 12-sano jirka. dhaqdhaqaaqa galmada, ”ayaa lagu yiri warbixinta. Waxay sidoo kale kufsadeen ama si kale ula dhaqmeen faraxumeyn, haween u raadsanaayey kaalmo caafimaad ama biyo xarumaha Amisom. ”
Zara oo daciif ah oo daallan ayaa dhacday oo ku dhex dhacday dhulka. Waxay ku foorarsatay booska uur jiifta, iyadoo murugaysan, ayay si adag caloosha ugu cadaadisay labada gacmood si ay uga nafisto xanuunka foosha xun ee ay dareemayso. Dhibaatadeedii waa dhammaatay laakiin jirkeeda oo dhan waxaa ku dhacay xanuun daran. “Waxba waan dhaqaaqi kari waayey,” ayay tiri Zara oo ilmada iska tirtiraysa, “Waxaan dareemay sidii qof jidhkeeda oo dhan lagu tuntay.”
Zara oo dhulka jiifa ayaa maqashay ciribta cagteeda oo teendhada soo dhaafaysa. Laba gabdhood oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa la hadlayey qaar ka mid ah askarta AMISOM iyaga oo ku sii jeeday teendho kale. Daqiiqado yar kadib, raadkii askarta kusoo dhowaaday ayaa aamusiyay Zara. Turjubaankii ayaa la soo noqday nin askarta ka mid ah wuxuuna istaagay iridda teendhada. Askarigii ayaa hore u soo dhaqaaqay.
“Halkan!” wuu qayliyey, isagoo u sii fidinaya warqad toban dollar ah oo uu gacanta ku haysto, “qaado oo bax.”
Waxay ahayd tilmaam qaawan oo ay ku aamusinayso. Ma dhaqaaqin, markaasuu ku tuuray lacagtii. “Haddaad qof eray kula hadasho,” ayuu raaciyay, “waan ku dilayaa.”
Zara ayaa isa soo uruurisay oo boorsadeeda madow ku garaacday garabkeeda. U dhiibida cunuga iyo boorso daawo ah, dhaqtarka — oo ku sugayay banaanka saldhiga — si deg deg ah ayuu kaga dhaqaaqay goobta. Zara si aan degganeyn ayey u degtay teendhooyinka dhexdooda iyo dibedda saldhigga iyadoo aad mooddo inaanay waxba dhicin. Sarkaalka kufsaday iyada ayuu daba socday ilaa ay saldhiga ka baxday. Markii ay sii dhex mushaaxeysay ilaaladii albaabka, ayaa askari Ugandheys ah oo mugdi ah, oo indha sarcaad ku sagootiyay. “Ma’salama” ayuu yidhi, isagoo dhoolla caddaynaya.